Aqalka Sare Oo Baaq Kasoo Saaray Xasilooni Darada Koonfur Galbeed Iyo Dagaallo Dhex-maraya Soomaalida Iyo Oromada – Goobjoog News
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare oo maanta kulan 9aad Kalfadhiga 4aad ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xasilooni darada ka taagay koonfur galbeed ayaa baaq ka soo saaray arrintaas iyaga oo sidoo kale baaq kale u diray dagaal ka socda tuulooyinka dhaca xuduudaha u dhaxeeya Deegaannada Soomaalida iyo Oromada.
Qoraalka Waxaa uu u Qornaa:
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare:
ISAGA 00 GUDANAYA waajibkiisa dastuuriga ah ee uu ku matelayo dawladaha xubnaha ka ah dawlada Federaalka
ISAGA 00 XOG OGAAL U AH xasilooni darada , nabadgeloyo iyo mida siyaasadeed ee ka taagan rnagaalada Baydhabo ee dawlad goboleed Koonfur Galbeed;
Waxa uu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa ehelada iyo qoysaskii dadkii Soornaaliyeed ee ku geeriyooday arna waxyeelo ka soo gaaraty qalalaasha iyo rabshadihii ugu darnbeeyey ee rnagaalada Baydhabo.
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare isaga oo welwel xoogan ka qaba in xaalada arnni iyo rnida rnaarnul ay faraha ka baxdo ayuu waxa uu ugu baaqayaa dharnrnaan dhinacyada ku lugta leh xaalada ka taagan rnagaalada Baydhabo in ay joojiyaan colaada iyo qalalaasaha ayna si nabadgelyo iyo wadahadal ah ku soo afjaraan is rnaandhaafka taagan si loo soo celiyo nidaarnka iyo kala darnbeynta Magaalada Baydhabo.
ISAGA 00 SI DHOW ULA SOCDAY dilalka iyo xasuuqa ka socday in muddo ah deegaanada ay wada degaan ama ay deriska ka wada yihiin Qowmiyadda Soomaalida iyo Oromada ee ay ka mid yihiin Tuulli-Guleed, Dheekaa, Mooyaale, Shinniile, Faafan, Feeracad iyo tuulooyinka dhaca xuduudaha u dhaxeeya Deegaannada Soomaalida iyo Oromada.
ISAGA 00 XOOJINAYA nabadgelyada iyo wadanoolaanshaha Qowmiyadda Soomaalida iyo Oromada.
Waxa uu Guddiga joogtada ah ee Goluhu ugu baaqayaa shacabka qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada in ay joojiyaan colaada ka dhex taagan kuna wada noolaadaan nabadgelyo iyo deriswanaag iyaga oo dhowraya mabaadiida 1yo shuruucda caalamiga ah ee Xuquuqul Aadanaha.
Baydhabo: Akhriso Magacyada Murashaxiinta Maanta Ka Hor Khudbeynaya Baarlamaanka Koonfur Galbeed